Vaovao - LESITE |Vaovao nohavaozina ny fonosan'ny vokatra ary mihalalina hatrany ny sarin'ny marika
LESITE | Ny fonosana vokatra dia nohavaozina ary mbola mihalalina hatrany ny sarin'ny marika
Taom-baovao sy fiainana vaovao miaraka amin'ny fanavaozana fonosana vaovao
Ny fotoana dia mifanaraka amin'ny mpanenjika nofinofy, ary taona lohataona hafa indray izao. Raha manao jery todika ny taona 2020 isika dia hiara-handresy ireo fahasahiranana, hiasa mafy, na hijanona ho mafana toy ny taloha. Samy manana ny vokatra azony avy ny tsirairay. Miandrandra ny taona vaovao, miandrandra fiainana tsaratsara kokoa ny olona, ​​ka samy hizara ny faniriany, hizara ny vokatra azony, ary hanomana ny taona vaovao sy ny fiainam-baovao. Amin'ny maha-mpitarika ny indostrian'ny plastika ao an-toerana, Lesite dia manohy manavao sy manavao, mampiditra vaovao ary manokatra ny santatry ny fanavaozana feno ny sarin'ny marika amin'ny diany mankany amin'ny haavo vaovao. Namorona sary marika vaovao avy amin'ny fitantanana voadio ny orinasa mankany amin'ny fonosana vokatra sy serivisy marika. Mba hanomezana fahafaham-po ny filan'ny tsena amin'ny dingana isan-karazany, dia manome antony manosika mafy sy antoka ho an'ny fivoarana haingana sy maharitra ny ho avy ary ny fananganana marika iraisam-pirenena.
Ny fonosana vokatra vaovao dia mamorona haavo vaovao
Hiova ho zava-dehibe. Ny vokatra andiany tafo Lesite 2021 dia haseho eo imason'ny besinimaro miaraka amin'ny sary fonosana ivelany vokatra vaovao. Ity fanavaozana fonosana ity dia natao indrindra ho an'ny boaty fonosana ivelany vokatra, ny ao anaty boaty fonosana, ny vatan'ny vokatra, ny anaran'ny vokatra, ny boky momba ny vokatra ary ny famaritana fonosana. Miaraka amin'ny fanavaozana mitambatra, apetraka eo amin'ny fuselage sy ny boaty famonosana ivelany ny logo marika mazava sy azo fantarina, mba hahafahan'ilay vokatra misongadina voalohany amin'ireo vokatra manjelanjelatra ao amin'ny indostria iray ihany. Na dia mahazo fankatoavana sy famantarana ho an'ny mpanjifa avo kokoa aza, ny Lesite Technology dia manantena ny ho afaka hampita mazava kokoa ny filozofia sy ny soatoavin'ny marika amin'ny alàlan'ny fanavaozana ny fonosana.
Fanavaozana vaovao ny serivisy, mamorona sanda vaovao
Noho ny maha matihanina, ny fanavaozana. Lesite Technology dia tafiditra lalina tao amin'ny indostria nandritra ny 15 taona, nanizingizina ny fanavaozana ny marika sy ny fanamafisana ny lanjan'ny marika. Ny fanavaozana ity fanavaozana endrika ity dia sublimation iray hafa amin'ny sary marika Lesite. Notarihin'ny famolavolana sary marika vaovao, i Lesite dia nahavita fiovana vaovao. Ny dikan'ny marika aingam-panahy avy amin'ny fanatsarana ny marika dia mameno an'i Lesite. Ny tsy fahampian'ny fampandrosoana amin'ny sehatry ny fanjifana amin'izao fotoana izao. Ao anatin'ny fikatsahana ny faharanitan-tsaina ankehitriny, na ny vokatra na ny fonosana, ny Lesite dia tsy mitsahatra manavao, sady mahafeno ny filan'ny mpanjifa, mandroso amin'ny fotoana!
1.After ny fonosana outsourcing upgrade
Lesite marika anglisy carton
Boaty ivelany sinoa marika Lesite
2. Aorian'ny fanavaozana ny ao anaty boaty
Lesite marika anglisy fonosana anatiny
Fonosana tsy miandany
3. Aorian'ny fanavaozana ny logo fuselage
Dikan-teny sinoa sy anglisy amin'ny endrika vatana marika Lesite
4. Aorian'ny fanavaozana ny tontonana fanaraha-maso
Lesite marika Sinoa sy anglisy dikan-ny fomba vatana
5. Taorian'ny fanavaozana ny nameplate
Lesite dia manana anarana amin'ny teny anglisy
Lesite Brushless English Nameplate
Lesite dia manana anarana sinoa
Lesite Brushless Chinese Nameplate
Nameplate tsy miandany
6. Aorian'ny fanavaozana ny boky
Lesite marika anglisy boky fampianarana
Lesite Brand Chinese Manual
Nohavaozina ny endriky ny fonosan'ireo vokatra andiany tafo an'ny Lesite Technology. Hanomboka ny 1 febroary 2021 ny fonosana vaovao (numera de série). Ny vokatra miaraka amin'ny fonosana vaovao sy taloha dia mitovy. Afaka manohy mampiasa ireo vokatra famonosana tranainy ao amin'ny fanisanany tany am-boalohany ireo mpandraharaha sy mpaninjara amin'ny ambaratonga rehetra. Mitaky dingana tsikelikely ny famokarana sy fizarana fonosana vaovao, ka tsy mila manahy momba izany ianao.
Misaotra noho ny fanohananao sy ny fahatokisanao maharitra an'i Lesite Amin'ny ho avy, ny Teknolojia Lesite dia hitodika hatrany amin'ny tsena, mifantoka amin'ny mpanjifa, hanohy hikaroka vokatra, hanatsara ny serivisy, ary hiezaka hanangana orinasa tena tsara maharitra sy hajaina.
Fotoana fandefasana: Feb-25-2021